संक्रमितलाई एम्बुलेन्सले पनि ओसार्न नमानेपछि यिनै प्रहरीले गाडीमा आइसोलेसनमा पुर्‍याए, सम्मानका लागि स्यालुट र शेयर गर्नुहाेस् – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > संक्रमितलाई एम्बुलेन्सले पनि ओसार्न नमानेपछि यिनै प्रहरीले गाडीमा आइसोलेसनमा पुर्‍याए, सम्मानका लागि स्यालुट र शेयर गर्नुहाेस्
admin June 5, 2020 जीवनशैली, समाचार 0
कपिलवस्तु क्‍वारेन्टाइनमा ‘अलपत्र’ कोरोना सं’क्रमितलाई कुनै पनि गाडी र एम्बुलेन्सले ओसार्न नमानेपछि कपिलवस्तुका एक प्रहरी अधिकृत पिपिई लगाएर पिकअप गाडी आफैंले चलाएर उनीहरूलाई आइसोलेसनमा पुर्‍याएका छन् । तीन दिनदेखी ‘अलपत्र’ कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकाका कोरोना सं’क्रमितलाई प्रहरी निरीक्षक प्रताप पौडेलले उद्धार गरी आइसोलेसन वार्डमा पुर्‍याएका हुन्।
प्रहरी निरीक्षक प्रताप पौडेल
सं’क्रमितलाई बोक्न एम्बुलेन्स चालकसमेत ड’राएपछि पौडेल आफैं तयार भएका थिए। उनले पिपिई लगाएर २२ सं’क्रिमतलाई आइसोलेसनमा पुर्‍याएका थिए। नगरपालिकाका ६ वटा क्‍वारेनटाइनमा रहेका सं’क्रमितलाई आइसोलेसनमा लैजान उनलाई ६ घण्टा लागेको थियो। कृष्णनगर नगरपालिका वडा नं. ३ लक्ष्मीनगरको मदरसास्थित आइसोलेसनमा सोमवार दिउँसो ३ बजेदेखि उनले ओसार्न सुरु गरेर राति ९ बजे सबै सं’क्रमितलाई उनले आइसोलेसनमा पुर्‍याए।
क्‍वारेन्टाइनमा बसेका मानिसहरू ड’राएका थिए। सं’क्रमितहरु नजिक पर्छन् की भनेर झनै आ’त्तिए। त्यो देखेर मैले केही गर्नु पर्छ भन्‍ने आँट जाग्यो,’ पौडेलले बताए। यस अगाडि पनि कृष्णनगर सीमा क्षेत्रमा को’रोना सं’क्रमणबाट मृ’त्यु भएका अर्घाखाँची भूमिकास्थनका पुरुषलाई पौडेलले बोकेर एम्बुलेन्समा ल्याएका थिए। पौडेलले अगाडि भने- ‘लामो समयसम्म पिपिई लगाउँदा बढी पसिना बगेको थियो। मलाई ड’र भने लागेन। शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त भएकाले जो’खिम लिन तयार भएको थिएँ,’
बाहिर निस्कदै हुनुहुन्छ? मुलुकभर २४ घण्टासम्म वर्षा हुने, सावधान रहनुस्
भिजिट भिसामा विदेशिने नेपाली युवती यौनकर्म लिप्त हुन थालेको यसरी खुल्यो रहस्य